Akhriso #MyHodgesStory Sheekooyinka Guusha Ardayda »Jaamacadda Hodges
In ka badan toban kun # MyHodgesStory's ayaa loo sheegay. Ardayda jiilka koowaad ee ardayda, ardayda halyeeyga ah, malaayiin doolar shaqooyinka guriga, #HodgesHeros, waalidiinta kaligood qalin jabisay…. sheekada qof walba waa mid gaar ah. Waxa kaliya ee run ahaantooda u wada ah dhamaantood waxay tahay inay lahaayeen geesinimo iyo waditaan ay ku qaadaan talaabada ugu horeysa.
Ku soo biir safkeena kana noqo dhiirrigelin Hawks mustaqbalka adoo wata sheekada guusha ardaygaaga.
Muxuu Yahay Sheekadaada # Safarka bilow maanta!
Guddoomiyaha Jaamacadda & Qalinjabiyeyaasha (BS & MBA)
"Sida arday badan oo Hodges ah, waxaan bilaabay waxbarashadayda sare noloshayda dambe waana inaan isku dheelitiro shaqo waqti-buuxa ah, qoys, iyo kulliyad."
Waa maxay sheekada guusha aad rabto inaad sheegto? Aynu kaa caawinno inaad raadiso dariiqaaga si aad uga mid noqoto kumanaan ka mid ah kuwa maanta ka qalin-jabiyay Hodges.
Milkiilaha Gabadha Pro
Eliana Tardio - Isgaarsiinta iyo Warbaahinta
Maxaa Loo Doortaa Hodges?
“Waan jeclahay Professor [Andrea] Fortin, sharaf ayayna ii tahay inay ii magacowday Ardeyga Bisha. Waxay marwalba diyaar u tahay inay caawiso, albaabkeedu marwalba wuu u furanyahay ardaydeeda, waana qof aad u dabacsan oo hal abuur leh marka ay timaado la shaqaynta dadka waaweyn ee wax barta sida aniga oo kale. Runtii waan ku qanacsanahay taas, waxaanan si daacad ah u dhihi karaa isku xirnaanta ayaa iga caawisay inaan gaaro riyadan ah inaan ka qalinjabiyo Mareykanka, hadana, ka shaqeynta dhanka shahaadada mastarka. ”
“Waxaad dareemeysaa dhiirigelin iyo dhiirigelin inaad ballaariso awoodahaaga shaqsiyeed isla markaana aad hal-abuurnimo yeelato, inaad noqoto madaxaaga, iyo inaad sameyso isbeddelka aad doonayso inaad ku aragto adduunka oo dhan. Qaadashada shahaado maahan cinwaanka. Waxay ku saabsan tahay aqoonta adiga ku beddelaysa si aad u noqotid qof wanaagsan ”
Dagaalyahan Dab Damis Dagmada Collier
Agaasimaha ALS Clinic
Amelia Vasquez - Maamulka Ganacsiga Saddex-Sano Qalinjabisay
“Waxay ahayd inaan nafteyda maalgashado. Waxaan dareemay inay [ku soo laabashada dugsiga] ay ku siinayso fursado wanaagsan abuurista mustaqbal cusub, waxaanan tusaale u noqon karaa carruurtayda, ”ayay tidhi. Waxaan doonayay inaan kasbado aqoon dheeri ah iyo xirfado aan hadhow kudarsamo ganacsiga ama dadaallada mustaqbalka. ”
Kasbashada laba darajo afar sano gudahood Amelia cWaxaa laga dhaafay inay waqti siiso carruurteeda, dhameystirto casharradeeda dugsiga iyo bixinta nooca ugu fiican nafteeda intii ay ku jirtay shaqada, Vasquez ayaa ka dhigtay inay shaqeyso waxayna dhameystirtay MBA-da sanadkii 2002.
“Waxaan ku amaanayaa guushayda dhammaan macallimiinta jecel ee daacadnimada leh ee Hodges…“ waad samayn kartaa tan, ”“ raac riyooyinkiinna. ” Waxaan ku hubeysnaa kalsoonida markaa igu kaliftay inaan heer sare gaaro, ”ayay sharraxday. "Waan ku kalsoonahay, waa layga doonayaa waana xamaasad badan yahay, waxaanan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo ka fikiraya inuu ku laabto dugsiga inuu eego Hodges."
Sarkaalka Warfaafinta Sarkaalka
VP ee Hawlgallada Cable USA
Kayla iyo Ryan Harp
Halyeey Ka Qalin Jabiyay